Lisitry ny haavon'ny Iron Saga | la-manette.com
Lisitry ny haavon'ny Iron Saga
7 février 2021 feh Mathilde Grimard
Ampiasao ny mechs tsara indrindra amin'ny Iron Saga mba hahazoana ady bebe kokoa. Ity ny tabilao Iron Saga farany indrindra, izay manasongadina ireo singa / mechs tsara indrindra ampiasaina amin'izao fotoana izao.
Kidou Sentai Iron Saga, fantatra amin'ny anarana hoe I-Saga, dia manambatra ny fahafinaretana amin'ny lalao milalao an-tsehatra miaraka amin'ny fahafaham-po amin'ny fanangonana vondrona (antsoina hoe mechs).
Amin'ny voalohany, mety ho sarotra ny manavaka hoe iza no mechs ilaina amin'ny dingana manaraka amin'ny lalao, indrindra amin'ny ady PvP mifaninana.
Mba hanampiana ny mpilalao dia namorona izahay lisitry ny ambaratonga voafaritra izay mametraka ny mechs amin'ny lalao manomboka amin'ny tsara indrindra ka hatramin'ny ratsy indrindra, mifototra amin'ny tanjaky ny PvP (mpilalao versus mpilalao).
Andeha isika hanomboka amin'ny voalohany.
Ireo no mechs tsara indrindra amin'ny lalao amin'izao fotoana izao.
Azo lazaina fa robot melee tsara indrindra amin'ny kilasiny. Manana fahasimbana tsara izy miaraka amin'ny toetra miady farany izay maharitra 5 segondra.
Ny Mephisto no fifangaroana tonga lafatra amin'ny fahaiza-miady sy ny mety ho fahasimbana. Izy koa dia manana faharetana tsara sy tsy fahampiana amin'ny debuffs.
Tahaka ny Mephisto, Asura dia tena haingana ary afaka miatrika fahasimbana mendrika. Ny faharetana matanjaka dia atokana ho an'ny toetra mahasoa izay mampihena sy manimba ny fahavalo rehefa rava ny Asura.
Ny robot Huang Long dia tonga lafatra ho an'ireo izay tia milalao soa aman-tsara rehefa mahazo vokatra tsara. Mahalana no tsy mahomby ny fanafihana lavitr'ezaka ataony, ary afaka manafoana ny fahavalo izy vao manomboka.
Ny Zulong dia ankasitrahana amin'ny maha-mpiady lavitra azy, saingy amin'ny toe-javatra maika dia afaka miaro tena akaiky izy. Ny fanafihan'izy ireo dia afaka mampihemotra ny fahavalo, mamela azy hanafika azy ireo avy lavitra.
Ity robot ity dia tsara amin'ny fanaraha-maso ny vahoaka satria afaka mamely fahavalo marobe amin'ny taratra tokana. Azo ampiasaina ihany koa izy io satria mizara ho mech 2 kely kokoa rehefa potika.
Ny Sin 3 dia manana fanafihana sy hafainganam-pandeha tsara izay ahafahany mifaninana amin'ny mech tsara indrindra. Ampiasaina tsara indrindra amin'ny paikadiny G mode ?? izay manasitrana ny tenany. Ny fametrahana G-mode anefa dia mitaky fiomanana betsaka mialoha.
Ny Galahad dia heverina ho mpihaza tsara indrindra amin'ny kilasy SS. Ny hetsika manokana nataony ihany koa dia manana ny iray amin'ireo fahasimbana avo indrindra azo alaina. Mipetraka amin'ny ambaratonga A izy noho ny fahalemeny, fa ankoatra izany dia tena tsara.
tena ratsy fanahy
Ny Belial dia safidy tank azo antoka ho an'ireo izay maniry izany. Izy io dia manana sakana manohitra ny halavirana izay mamerina, ary mamerina ny fahasalamany rehefa latsaka ambanin'ny 50%. Raha mitady fahavelomana ianao dia ny Belial no filokana tsara indrindra ho anao.
Tahaka an'i Belial, ny Paimon dia manana sakana manohitra ny halavirana azo rechargeable. Izy io dia manana safidy tsara kokoa amin'ny fanaraha-maso ny vahoaka, miaraka amin'ny fahaiza-manao AoE izay afaka mandringa ny vondrona fahavalo ihany koa.
Ny Reno mk2 dia hery mirehidrehitra afaka mametraka tsindry amin'ny fahavalo na dia eo am-piandohan'ny ady aza miaraka amin'ny fahasimbana manimba. Io hery io dia onitra amin'ny endriny tena marefo. Raha matoky tanteraka ny fahaizanao manafintohina ianao, ny Reno no robot ho anao.
Ny Bat Samurai dia fofonain'ny rivotra madio ao amin'ny kilasy melee. Manana fahasimbana be izy saingy tsy mandroso amin'izany. Fa kosa, misafidy ny hanamafisana ny fiaraha-mientana miafina sy ny fitehirizana ny tenany amin'ny alàlan'ny fanasitranana izy.
Raha te hanorisory tanteraka ny mpifanandrina aminao ianao dia ampiasao ny Dangaioh. Tena sarotra ny mamono azy ary mety hanapoaka baomba anao amin'ny vokatry ny sata. Ity robot ity dia tonga lafatra amin'ny ady lava sy tsy misy farany.
Ny Susanoo dia mpanafika haingana izay manana fitaovam-piadiana azo ampiasaina amin'ny fahaiza-manao AoE. Ny sakana fiarovana dia mameno ny boaty fitaovany feno.
Ny Tsukiyomi dia robot fanohanana ambaratonga A noho ny fahaizany mampiato ny fotoana sy manakorontana ny onjan'ny fahavalo. Azo tehirizina ihany koa amin'ny alalan'ny sakana lavitra.
Ny Thor dia afaka manasitrana sy mampisy fiantraikany amin'ny sata rehefa apetraka amin'ny toerana sarotra. Izany no mahatonga azy io ho iray amin'ireo mechs mahasosotra kokoa hiatrehana azy.
Robot haingana be miaraka amin'ny fanafihana AoE avo lenta mba hitazonana ny vahoaka. Ny Goraiga dia somary tsy ampy ao amin'ny departemantan'ny fahasimbana, na izany aza.
Robot lavitr'ezaka mahafaty miaraka amin'ny fanamboarana mety. Ampiasao ny Wood na Trista ho mpanamory mba hahazoana vokatra ambony indrindra.
Vakio ihany koa: Ny fakan-tsary 360 tsara indrindra: mitifitra panorama, horonan-tsary 360, selfies ary maro hafa.
Ireo mechs dia ambany kely ny haavon'ny S. Tena tsara izy ireo amin'ny tenany. Izy ireo dia tena tsara amin'ny tenany manokana ary indraindray dia afaka mandresy ny S-tiers amin'ny fananganana tsara.
Ireo mekanika ireo dia safidy matanjaka amin'ny lalao PvP (Player vs. Player). Tsy dia matanjaka toy ireo eo amin'ny laharana voalohany izy ireo, saingy tsy manala ny tanjaky ny fandresena izany.
Ny Xuang Wu dia mifantoka amin'ny ady akaiky amin'ny fampiasana fanafihana mahery vaika sy tifitra mandringa.
Robot mahay manafika ny fahavalo. Loharanon'ny fahasimbana mafy.
Cosmos tsy manam-petra
Safidy tsara ho an'ny fihaonana amin'ny boss sy PvE. Mahery amin'ny atiny PvP ihany koa fa tsy maintsy hotarihin'i Igarashi mba hamoha ny tanjany.
Ny Deer Stalker dia manana dodging tsara indrindra amin'ny lalao. Afaka manafika ny fahavalo izy ary avy eo mihemotra haingana ary miteraka aretina amin'izy ireo.
Ny Nero ihany no mivadika ho robot lavitra rehefa nohavaozina ho Kai. Mariho fa ity robot ity dia ambaratonga F raha tsy misy ity fanavaozana ity.
Mizara fitoviana sasany amin'ny Infinity Cosmos. Manana fahaiza-manao tank mendrika ihany koa izy.
Ny Albatross dia robot fiarovan-tena izay afaka mamono sy misoroka azy ireo. Manana buff amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana izy izay mampitombo ny fahavelomany.
Vakio ihany koa: Lalao PC 20 tsara indrindra amin'ny fanaraha-maso
Mbola safidy mendrika ho an'ny PvP ihany ireo mechs ireo, saingy mila ezaka sy fanitsiana bebe kokoa izy ireo mba ho azo tanterahina.
Fiainana tsara sy fahaiza-manao. Ny fahasimbana manjavozavo sy ny fahaizany debuff dia mamerina azy amin'ny ambaratonga C.
Ny Zhuque dia manana fahasimbana sy fahaiza-manao mendrika fa ny rafitra mihozongozona. Misy mechs tsara kokoa izay manana toetra mitovy nefa tsy manao sorona ny fahavelomana.
Ny Gwain dia robot tsy manam-paharoa izay afaka mampifangaro ny mpanohitra amin'ny debuffs.
Na dia eo amin'ny elanelana mirehidrehitra aza ny ankamaroan'ny fanafihan'ny Astaroth, dia manana fiompiana mametaka izay afaka manidy ny elanelana amin'ireo fahavalo tsy ampoizina izy.
Ny Valk dia mamela ny mpanamory azy hampiasa fahaiza-manao misesy. Mety ho toy ny fahaiza-manao mahay izany, fa ny statistika mahantra an'i Valk dia mampifandanja izany.
Sarotra tratra ny Lelaben'ny Demonia noho ny fahaizany mamiratra. Mandeha amin'ny telefaona mankany amin'ny sahan'ady izy io ary manimba ny mpifanandrina.
Ny Longdan no robot lavitra anao izay mitifitra balafomanga sy bala. Afaka manao fahasimbana mendrika ihany koa izy eo akaiky.
Ny Brynhild dia robot haingana izay manana fiaraha-miasa tsara amin'ny mpanamory azy. Ny olan'izy ireo dia avy amin'ireo singa fitaovam-piadiana ampiasainy. Tsy tsara mihitsy izy ireo.
Safidy matanjaka amin'ny mecha melee. Tena iray dimensional anefa.
Ny Tyrant dia robot lavitr'ezaka tsara, saingy tsy ampy fitaovana hiadiana amin'ny mpanafika amin'ny fomba mahomby.
Mifantoka amin'ny fanakorontanana ny fahavalo amin'ny toerana lavitra be. Tsy dia ampiasaina loatra noho ny herin'ny fahasimbana ambany.
Tsy dia misy zava-mitranga loatra ho an'ny Tyrant II. Ampiasaina indrindra amin'ny sehatra PvE izy io satria manana fanamboarana hafa tanteraka ho an'ny PvP.
Manana fahasimbana tsara sy elanelana tsara, saingy tsy afaka miantehitra afa-tsy amin'ny dodges ianao mba ho velona.
Ireo mechs ireo dia manana fampiasana manokana manokana, izay no mahatonga anao tsy hahita azy ireo matetika amin'ny PvP. Ny sasany amin'izy ireo dia tena tsara amin'ny PvE.
Ny Agaress dia manana fahavelomana tsara noho ny ampinga anti-range sy ny fanafihana lavitra. Na izany aza, manana fahasimbana faran'izay kely izy, ka mamindra azy amin'ny ambaratonga D.
Polisy mpandrava korontana
Mitovy amin'ny Agaress, saingy manana fahaiza-manao debuff. Iharan'ny fahasimbana ambany dia ambany ihany koa izy.
Ny Bala dia robot drone misy fahasimbana kely sy ampinga antonony.
Raha vao manomboka ianao, ny Artemis dia pickup mendrika. Mahery ny fahaizany manakorontana. Mihozongozona be izy amin'ny fiafaran'ny lalao noho ny fahasimbana ambany sy ny fahavelomany.
Robot manafintohina tsara noho ny fahaizany mamorona clones sy manipy shurikens. Tena tsy ampy fahavelomana izy io noho ny toetrany marefo.
Ny fahasimbana mendrika an'i Tsukikage dia mety hitondra anao lavitra ao amin'ny PvE, fa ny faharefoan'ny PvP kosa dia ratsy.
Ny Bloodwolf no mpandefa balafomanga lavitra anao. Diso fanantenana amin'ny ankamaroan'ny lafiny.
Ny Baihu dia robot melee antonony fotsiny izay tsy miavaka amin'ny fomba rehetra.
Qi Qing Long
Ity robot ity dia manana fahasimbana ambany ary ambany ny fahavelomana, saingy manana fahaiza-manao fanakorontanana mendrika.
Vakio ihany koa: Lalao 35 tsy maintsy ananana rehefa mijanona ao an-trano ianao
Ireo no mechs ratsy indrindra amin'ny lalao ho an'ny PvP. Tandremo fa ho sahirana ianao raha mampiasa azy ireo.
Safidy tsara ho an'ny lehibeny, saingy mihozongozona tanteraka ao amin'ny PvP.
Ny Taylor Star dia ratsy naoty tamin'ny sokajy rehetra.
Manana balafomanga miorina amin'ny afo, fa ny toetrany marefo dia latsa-danja amin'ny PvP.
Ny tanjon'ny Tyrant I amin'ity lalao ity dia ny hamidy vola madinika hamolavolana Tyrant II na III.
Ny Kamui dia tsy robot ratsy, fa zara raha ampiasaina amin'ny PvP. Na izany aza, dia ekena ho iray amin'ireo robot bump tsara indrindra misy.
Ny fomba filalaon'ny basy Juque dia tena miavaka. Ny olana dia tsy mandaitra. Raiso ny sisa tavela amin'ity robot ity ary manangana tsara kokoa.
Ny lalao mpitsikilo 15 tsara indrindra, araka ny Metacritic